विज्ञ भन्छन्, ‘यस्ता केटीसँग टाढै रहनुहोस् | KHABAR VIDEO
Home / NEWS / विज्ञ भन्छन्, ‘यस्ता केटीसँग टाढै रहनुहोस्
about 5:50 PM Add Comment NEWS Edit
१. आफुले भनेको सबै ठिक अरुले भनेको बेठिक भन्ने प्रवृति ः– केही महिलाहरु यस्ता हुन्छन, जो अरुको कुरा सुन्न नै चाहँदैनन् । यस्ता बर्गका केटीहरुलाई के लाग्छ भने उनीहरुलाई दुनियाँमा थाहा नभएको कुरा केही छैन र उ जस्तो सर्बज्ञ दोस्रो व्यक्ति यो समाजमा छैन । उनीहरुको यही सोचाइको कारण उनीहरु सधै अरुमाथि राज्य गर्न अग्रसर हुन्छन् । विज्ञहरुका अनुसार सुरुवातमै विना हिच्किचावट कुनै पुरुषमाथि एउटा महिला हाबी हुने तरिकाले प्रस्तुत भइन् भने उनीबाट तत्काल सतर्क हुनु पर्छ । किनकी यस्ता केटीहरु अरुलाई भेडा ठान्छन् र आफुलाई महान सम्झेर आफ्नो केटासाथीमाथि शासन गर्न तम्सिहाल्छन् ।
३. बुझ्नै नसकिने खालका केटीहरु ः कतिपय केटीहरु यस्ता हुन्छन् कि उनीहरको बारेमा बुझ्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ । उनीहरु केही विषयमा राखेको जिज्ञासामा ‘हो’ भन्ने जवाफ दिइरहेका हुन्छन् । तर बास्तवमा उनीहरुलाई भित्र भित्रै ति कुराहरु ‘होइन’ भन्ने लागिरहेको हुन्छ । असमझदार केटीहरुसँगको सम्बन्ध पनि तत्काल पुर्णविराम लगाउनु बुद्धिमानीपुर्ण हुन जान्छ किनकी भविश्यमा यस्ताको पछि लागियो भने पछुताउनुको विकल्प नै हुँदैन ।
८.अरु सबै सुखी छन्, म मात्र दुःखी छु ः कतिपय केटीहरु कति असन्तोसी प्रकृतिका हुन्छन् भने उनीहरु कहिल्यै पनि खुसी रहन नै सक्दैनन् । अरु सबै सुखी छन् तर म भने दुःखी छु भन्ने भावना त्यस्ता केटीहरुमा आइरहन्छ । फलानोले त्यत्रो पैसा कमायो, फस्ट डिभिजनमा डिग्रि पास गर्यो, उसको छोरोले यस्तो गर्यो तर मैले केही गर्न सकिन, उसकी श्रीमती अमेरीका पुगी, अस्टे«लिया पुगेर सेल्फी हानेर तस्विर फेसवुकमा राखी ।